ရုပ်အိမ် Build & ဒီဇိုင်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Android အတွက်ရုပ်အိမ်ဆောက် & ဒီဇိုင်း Simulator
အန်းဒရွိုက် APK ကိုအဘို့အရုပ်အိမ်ဆောက် & ဒီဇိုင်း Simulator
အဆိုပါ Developer တွေအကြောင်း
Sablo ဂိမ်းများတစ်ဦးလူကြိုက်များဂိမ်း '' ဖွံ့ဖြိုးဆဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအခမဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းကို Android device များအတွက်သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုဂိမ်းများကိုလူသိများကြပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2013 ဝန်းကျင်ကတည်းကသိရသည်။ လောလောဆယ်သူတို့ရဲ့အစုစုကိုသူတို့ထဲကအများစုဟာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ခြင်း, 80 app များကိုကျော်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကသန်း 50 ကျော်သွင်းယူမှုများရရှိခဲ့ပါပြီ။ သင်သည်သူတို့၏ဂိမ်း 800,000 ရုံပြီးခဲ့သည့်လများတွင်တပ်ဆင်ပြီးထက်ပိုရှိပါတယ်သိရသလား? တူးဖော် Simulator 2019, Doll အိမ်ဒီဇိုင်း & Decoration နှင့် forage လယ်ထွန်ခြင်းကိုစိုက်ပျိုးရေးစပါးရိတ်ရာကာလအားလုံး Sablo ဂိမ်းများအားဖြင့်ဂိမ်းဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ရဲ့ဂိမ်းအများစုဟာ, ကောင်းစွာအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်သူတို့၏အကြောင်းအရာအများစုအတွက်ပျော်စရာဒြပ်စင်ကိုကျေးဇူးတင်လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့အသင်းထိပ်ဆုံးဂိမ်း developer များ, ကျွမ်းကျင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အနုပညာရှင်များပါဝင်ပါသည် - စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံး app များကိုဖန်တီးထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဆက်ကပ်အပ်နှံထား။ အဖွဲ့အမျိုးမျိုးရှိသမျှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက၎င်း၏မစ်ရှင်ရရှိဂုဏ်ယူကြာပါသည်။
Sablo ဂိမ်းများရုပ်အိမ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ကျိန် ဆို. ပူဇော်ကြသည် ဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်း။ Build & ယာဉ်, ရုပ်အိမ်တည်ဆောက် & ဒီဇိုင်း Simulator ကိုအားလုံးလူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်းအတူတူ themes များ၌ရှိကြ၏။ ဖန်စီ options တွေကိုအသေးစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထိန်းချုပ်မှုသောင်မတင်နှင့်အတူဒီဂိမ်းပျော်စရာ၏ဝန်ပါ! ရုပ်အိမ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်အိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းဆောင်ခဲ့အပြင် developer များဂိမ်းမှစှဲသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန် features တွေအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျ, အရုပ်အိမ်ကျွမ်းကျင်စွာအိပ်ခန်းနှင့်လူနေမှုအာကာသပြင်ဆင်တိုင်အောင်, ရုပ်အိမ်၏အပြင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်!
မစ်ရှင်၏ပဒေသာကစားသမားဂိမ်းအားလုံးပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖြစ်ကြောင်းတက်ယူနိုင်တဲ့ဂိမ်းထဲမှာရှိပါတယ်။ သင်ပင်သင်သည်တည်ဆောက်ခြင်းနေသောရုပ်အိမ်၏ 3D ဗားရှင်းကိုကြည့်နှင့်သင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျွမ်းကျင်မှုထားရန်အခွင့်အလမ်းရနိုင်ပါလိမ့်မယ်! ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပြုလုပ်ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးအခြားအရုပ်အိမ်သူအိမ်သားဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းတစ်ခုတော်တော်လေးဆင်တူထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးများသောအားဖြင့် voxel ဒီဇိုင်းနှင့်အတူပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းကို-line ကိုသင့်ရဲ့ကလေးအရုပ်သီးခြားအိမ်သူအိမ်သားစလေိုကွောငျးအဆိုပါလိုင်းများတလျှောက်တတ်၏။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးရုပ်အိမ်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသငျသညျအထိယခုပါ!
အဆိုပါဒီဇိုင်းကို execute ဖို့နားလည်ရန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်အရုပ်အိမ်သူအိမ်သားဖွံ့ဖြိုးဆဲပျော်စရာရှိသည်နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ကပုံရသည်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်သည့်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ကွက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အချို့အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, သင်က၏ Hang ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ကဖြစ်စေစိန်ခေါ်မှုများကိုချစ်နှင့်အောင်မြင်ခြင်းများစွာသောအသိနှင့်အတူအရုပ်အိမ်သူအိမ်သားအပြီးသတ်ဖွယ်ရှိထက်ပိုပါတယ်။
ရုပ်အိမ် Simulator အင်္ဂါရပ်များ Build & ဒီဇိုင်း
ကျနော်တို့မြင်ကြပြီသကဲ့သို့, ရုပ်အိမ် Build & ဒီဇိုင်း Android အတွက် Simulator ဂိမ်းလုံးဝဒီကြက်သရေအရုပ်အိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေး၏ပြီးပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုများ free.You ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးသင်ဘဝရန်သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုရောက်စေဖို့တိုင်းအခွင့်အလမ်းပေးခြင်း, အရည်အသွေးမြင့် 3D ဂရပ်ဖစ်အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
သင်ကဒီဂိမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနှင့်အတူတကွနာရီကစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်တွေ့ရုပ်အိမ် Simulator ကိုနှင့်အတူသငျသညျတကယျ့အားရစရာဘို့အတွက်များမှာ!
အဆိုပါပုံရိပ်ယောင်များ, ဂရပ်ဖစ်နှင့်အခြားဒြပ်စင်များအပြင်သူတို့၏အသံသက်ရောက်မှုလည်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြ၏။ စွဲငြိဖွယ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဂိမ်းစွဲသငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့သေချာပါသည်။
အဆင့်ဆင့်၏ပဒေသာသင်တိုးတက်မှုစေအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အခက်အခဲတိုးမြှင့်ရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုအပြီးသတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖြတ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားရုံဂိမ်းကိုပိုပြီးပျော်စရာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုစေမယ့်ကြသည်!
ရုပ်အိမ်ဆောက် & ဒီဇိုင်း Gameplay
အဆိုပါရုပ်အိမ် Build & ဒီဇိုင်း Simulator သင်တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းတဲ့အရုပ်အိမ်သူအိမ်သားတည်ဆောက်ရန်အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်နှင့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့တော်တော်လေးထူးခြားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအိမ်မှာအလှဆင်နှင့်ကတင်ဆက်သည့်စိန်ခေါ်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်ဆင့်၏ပဒေသာသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်လုပ်ဆောင်နေသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဂိမ်းထဲမှာရှိပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့နောက်ကွယ်ကအဓိကစိတ်ကူးလှပသောအရုပ်အိမ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အရုပ်အိမ်၏အမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်ရေးအပြင်, သင်ကအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသှငျအပွငျ decorating တာဝန်ခံလည်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါကမီးဖိုချောင်, ရေချိုးခန်း, အိပ်ခန်း, ဧည့်ခန်းနှင့်ဥယျာဉ်ပါဝင်သည်။ သင်တို့သည်ဤအခန်းပြင်ဆင်နှင့်တတ်နိုင်သမျှကြောင့်ချစ်စရာနှင့်လက်တွေ့ကျကျလုပ်ကနေရှေးခယျြနိုငျသောပရိဘောဂများအပိုင်းပိုင်းများများရှိပါတယ်။ သင်ဤစိန်ခေါ်မှုတက်ယူလိုပါကရိုးရိုးဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးစတင်ရန်!
အဆိုပါရုပ်အိမ်၏ပြင်ပရှုထောင့်နှင့်ပြည်တွင်းရေးတဦးတည်း - သင်တို့အဘို့တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆောက်လုပ်ရေးနှစ်မျိုးအဓိကအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ ဂိမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်သို့ခွဲခြားထားပါသည်။ သငျသညျတာဝန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအလွန်ပထမဦးဆုံးတာဝန်ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာမှကွန်ကရစ်ရောနှောမောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရပ်မှ, သငျသညျယခုအခြေခံအုတ်မြစ်ဖန်တီးရန်အပေါက်ထဲသို့ရောနှောပစ်ပါလိမ့်မယ်။
အစိုင်အခဲရုပ်အိမ်တည်ဆောက်ခြင်းကိုဆက်လက်မှန်ကန်သောဧရိယာပေါ်တွင်တိုင်ထားပါ။ တစ်ဦးကရိန်းနှင့်အတူသငျသညျရိုးကိုရရှိရန်နှင့် loader ကိုအပေါ်မှာထားရန်လိုအပ်သည်။ Next ကိုခြေလှမ်းမြို့ရိုးသည်ပြား, မှန်ကန်သောဧရိယာ၌တိုင်နေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့! သင်တို့သည်ဤဆောက်လုပ်ရေး element တွေကိုနေရာချပေးဖို့စံပြဧရိယာမှပဲ့ထိန်းပါလိမ့်မည်။ သငျသညျနေ့အဘို့ပြုပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြီးကို clean up ။ တစ်ဦးဘူဒိုဇာနှင့်အတူအမှိုက်တက် Pick, သင့်ထရပ်ကားသူတို့ကို load, သူတို့များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
ဂိမ်း၏အတွင်းပိုင်းအသှငျအပွငျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. , သင်သည်သင်၏အရုပ်တစ်ခုချစ်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မှာကဲ့သို့အာကာသကိုဖန်တီးရန်တာဝန်ရှိကြလိမ့်မည်။ တိုင်း decorating ဒြပ်စင်သည်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်ကပျော်စရာ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်ဆော့ကစားရန် immersive ဂိမ်းပါစေ။ ဒီဂိမ်းနဲ့အတူသင်ဖျော်ဖြေမှုနာရီ၌ရှိကြ၏သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်တွေ့ဂရပ်ဖစ်, အသံသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကစားသမားပျော်စရာရှိသည်အာမခံဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။
10 အဆင့်ဆင့်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမစ်ရှင် featuring တစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်နှင့်သင်ပြီးစီးရန်မျှော်လင့်နေသောစိန်ခေါ်မှုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။ ကစား Start နဲ့ပျော်စရာ၏ဝန်ရှိသည်! ဤ ရောင်စုံဂိမ်း အချိန်ကိုသွားမယ့်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ App ကို
Barbie Dreamhouse Adventures ကို - ဒေါင်းလုပ်
sim ဒီဇိုင်းမူလစာမျက်နှာ ...
ရုပ်အိမ် Build & ဒီဇိုင်း ရုပ်အိမ် Build & ဒီဇိုင်းကို Android App ကို ရုပ်အိမ် Build & ဒီဇိုင်း App ကို Android မှာ
သြဂုတ်လ 19, 2019 မှာ 7: 57 နံနက်
အစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံး App ကို App ကို APK ကိုမှာလုပ်ကကောင်းသောနှင့်ကောင်းမွန်သောင်ကြောင့်ကိုချစ်